भक्तपुर मृत्यु प्रकरणः श्रीमती र छोराको हत्यापछि विष सेवन गरी आत्महत्या ! « MNTVONLINE.COM
भक्तपुर मृत्यु प्रकरणः श्रीमती र छोराको हत्यापछि विष सेवन गरी आत्महत्या !
काठमाडौँ । शुक्रबार साझ भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–९ निकोसेरास्थित एकै घरका तीन जना मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । घर भित्र कुकुरसहित तीन जना मृत भेटिएपछि प्रहरी घटनालाई विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरी घटनास्थल पुग्दा घरका ढोका खुल्लै रहेको अवस्थामा ३६ वर्षीय सुदीप अधिकारी, उनकी श्रीमती ३४ वर्षीया सम्झना अधिकारी र १५ वर्षीय छोरा सुशान्त अधिकारीको शव छुट्टाछुट्टै तलामा फेला परेको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार दुई जनाको हत्या र एक जनाले आत्महत्या गरेको देखिए पनि पोष्टमार्टमको रिपोर्ट नआई केही बताउन नसकिने महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) दीपक थापाले बताए ।
सो घटनामा सुदिपले श्रीमती र छोराको हत्या गरेपछि आफैले विष सेवन गरेको हुनसक्ने प्रहरीको निश्कर्ष छ । घटनास्थलमा एउटा विषादीको बट्टा समेत फेला परेको छ । प्रहरीले भान्साको चक्कु र दाउ छोरा सुशान्तको कोठाबाट बरामद गरेको छ ।
सुदीप मृत भेटिएको किचनमा विषदीको बट्टा प्रहरीले भेटाएको छ । आमा, छोरा र कुकुरको शव कुहिएको र सुदीपको शव नकुहिएको हुनाले उनीहरुको हत्या गरेर केही दिनपछि सुदीपले विष खाएर आत्महत्या गरेको हुनसक्ने अनुसन्धानमा खटिएको एक प्रहरीले बताए । आमा–छोरा पल्टिएको ठाउँमा रगत लतपतिएको छ ।
आमा–छोराको टाउकोमा चोट पनि लागेको छ । घटनास्थलमा भेटिएको दाउ र चक्कुले हानेर आमा छोराको हत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको आंकलन छ । सुशान्तको शवमा ‘राम राम’ लेखेको पिताम्बर ओढाइएको थियो ।
यी सब घटनाक्रमलाई अध्यान गर्दा सुदिपले श्रीमती र छोराको हत्या गरेर आफुले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको हुनसक्ने अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारी बताउछन् । तीनैजनाको शव भक्तपुरको काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) मा पोष्टमार्टम हुँदैछ । ‘पोष्टमार्टम रिपोर्टको आधारमा थप अनुसन्धान हुन ेमहानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी थापाले बताए ।
भक्तपुर मृत्यु प्रकरणः थालमा विषजस्तो पदार्थ भेटियो !